Lalao afa-mandositra - Easy Multi Display - signage nomerika
Hatsarao ny traikefan'ny mpilalao amin'ny Easy Multi Display
"Easy Multi Display dia manampy amin'ny fanatsarana ny traikefan'ireo mpilalao lalao afa-mandositra!"
Fampisehoana ny orinasa
Smart Escape Game dia lalao fandosirana misy efitrano lalao 5 any Chambéry. Iray amin'ireo efitrano ireo dia tokana, tokoa, tsy mitovy ny tantaran'ny tsirairay!
Miaraha mitsangatsangana amin'ny namanao ao amin'ny tranon'ny mpihaza na mitsidika ny sela 404 hanadihadiana ireo fanjavonana manelingelina. Angamba efa nahazo ny karatra fanasana nataonao tamina fety tsy miankina tao an-tranon'ny mpandraharaha mpanankarena ianao? Raha fintinina dia ho fantatrao fa maro ny fanamby miandry anao amin'ny lalao Smart Escape any Chambéry kanefa vonona hanaiky ireo fanamby ireo ve ianao?
Inona ny configurement-ny?
The escape game company has opted for 5 licenses of Easy Multi Display in order to display the software on each of its screens located in each room of the escape game!
They have been using our Digital Signage Solutions for 5.5 years.
Tranonkala Smart Escape Game
Fa maninona izy no nifidy Easy Multi Display?
Smart Escape Game uses Easy Multi Display in each of its rooms to present clues and other messages to teams trying to solve the room's secret!
Amin'ny alàlan'ny tsindry tokana dia afaka mandefa hafatra amin'ireo ekipa ao anatin'ny efitrano fandosirana izy ireo izao.
NAHOANA IANAO MAMPIKA FOTOTRA MULTI?
Easy Multi Display dia mifanaraka amin'ny fikiranao
Atsaharo ny mampifanaraka ny tenanao amin'ny hafa rindrambaiko fanaovana sonia dizitaly ary avelao ny Easy Multi Display hampifanaraka ny fikirakira anao! Amin'ny alàlan'ny rindrambaiko no ahafahanao mampiseho monitor hatramin'ny 6 ary hatramin'ny faritra 24!
Hatsarao ny traikefan'ny marary
Ataovy mora kokoa ny fiainan'ny marary amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fampiononany mandritra ny fotoana fiandrasana. Mampita horonantsary, infografika ary maro hafa!
Rindrambaiko havaozina tsy tapaka
Isan'andro, ny ekipanay dia miasa amin'ny rindrambaiko hanome anao ny tsara indrindra amin'ny takelaka nomerika, tsy irery ianao intsony satria eto koa izahay hanampy sy hanome torohevitra anao mandritra ny fampiasana ny Easy Multi Display.
IZAY LAZAIN'NY MPITENY ANAY
Ny fanaraha-maso lavitra no nanapa-kevitra hanasonia anay. Izy io dia mamadika ny rindrin'ny horonantsary ho ivon-baiko miovaova
Mpitantana IT SDIS
EMD no hany fitaovana W10 hizara tsara ny efijery misy ahy
Ny vidin'ny vahaolana dia tsy misy fampitahana amin'ny tolotra nentim-paharazana.
Mpitantana ara-bola SDIS
TOTAL SOLUTION COS
Antsoinay izany mora fampisehoana marobe satria mifoha ary mihazakazaka miaraka amin'ny a
Ny vahaolana amin'ny signage nomerika miaraka aminay dia mora.
Inona no ilainao mba hanombohana ...
Solosaina misy karatra grika - mahay mampiasa fampisehoana marobe.
Maro amin'ny TV araka ny takinao amin'ny filaharana fampisehoana takiana.
Easy marika fampiasa rindrambaiko mora.
Tsy misy vidiny miafina.
Tsy misy vidiny isam-bolana.
Tsy misy fitaovana sarotra.
Ny fahazoan-dàlana tokana tsy misy addons na upgrade.
1 Fahazoan-dàlana rindrambaiko
Asehoy amin'ny efijery 1 hatramin'ny zona haino aman-jery tokana 4
Fanavaozana rindrambaiko rahona mandritra ny 12 volana
Ny fidirana amin'ny tambajotra eo an-toerana
Fanofanana an-tserasera amin'ny fanohanana
Ny marika rindrambaiko voamboatra
Ny safidintsika malaza indrindra.
Asehoy amin'ny efijery 6 hatramin'ny zona haino aman-jery tsy manam-paharoa 24
Fandraisana amin'ny tambajotra eo an-toerana (mitaky fahazoan-dàlana 2: PC Server sy PC Player)
Fametrahana sy fanohanana eo an-toerana
Ny rindrambaiko feno sy ny serivisy feno.
From € 899 exc.VAT *
Ny sasany amin'ireo serivisy mety ho an'ny mpanjifantsika orinasa:
Fandraisana amin'ny fanohanana teknika lavitra
Mifandraisa aminay anio hiresaka ny zavatra ilainao.
Mora ampiasaina Interface
Tianay fotsiny ny mpanjifanay fa tsotra ny fampisehoana ny haino aman-jery misy azy ireo amin'ny Easy Multi Display. Ny interface tsara amin'ny rindrambaiko dia mitarika anao amin'ny dingana fanavaozana isaky ny dingana dingana, manontany anao ireo fanontaniana mety rehetra eny an-dalana.
Tsy mila mpampianatra teknisiana ianao raha mitsangana sy mihazakazaka miaraka amin'ny Easy Multi Display.
Namboarina tamin'ny sehatry ny masontsivana fampisehoana
- Ny mazoto mora aseho amin'ny mpanao hatsarana dia manampy anao amin'ny dingana fanamboarana.
Tehirizo ny fanamafisana marobe
- Tehirizo ireo fanamafisana fampisehoana marobe ary amboary mora.
amin'ny fiteny maro
- Safidy fiteny: anglisy, frantsay, sinoa, Espaniôla, Deutch efa mandeha ...
Mila fanampiana fanampiny fanampiny? Manolotra fiofanana an-tserasera sy momba ny fanohanana rindrambaiko izahay, azafady mba hifandraisa aminay!
MITADIAVA FIVAROTANA FOTSOTRA FARANY MBOLA MORA
Tongava fidirana eo noho eo
MANDROSO NY FIAINAN'NY MPAMORATRA SY NY TOERAN-TANORA
Te-hahita Easy Seho fampisehoana amin'ny hetsika? Mifandraisa aminay mba handamina demo maimaimpoana, na handray fiofanana avy amin'ny ekipa teknika izahay.
Midira ao amin'ny pejinao fampisehoana >
Te hanana tolotra manokana & fihenam-bidy?
Misoratra anarana amin'ny kaontinao ary tehirizo.
Hanomezam-baovao anao izahay ary misy fihenam-bidy indraindray. Tsy handoka na manofa na hivarotra ny mombamomba anao izahay.
Mifampitaona ary mangataka fehezanteny e ...
Mamandraha demonia fampirantiana anio.
Jereo izay azon'ny Easy Multi Display...
Fenoy ny forme etsy ambany ary hifandray tsy ho ela ny iray amin'ny ekipanay mba handamina fotoana.
Manorata fotoam-panofanana anio.
Hakao tsara amin'ny Easy Multi Display ...
Fenoy ny forme eto ambany ary hifanerasera ny iray amin'ny ekipanay mba hiresaka momba ny filanao fampiofanana.